Blog na-eto ngwa ngwa na mbara ala? | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 7, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Ihe karịrị otu afọ gara aga (2005) ekpebiri m na m kwesịrị isetịpụrụ onwe m ụfọdụ teknụzụ. Site n'ike mmụọ nsọ dị ka Seth Godin, Malcolm Gladwell, Robert Scoble na Shel Israel, m na-abanye na ịde blọgụ, ịkparịta ụka n'socialntanet, njikarịcha nyocha, na nchịkọta tinyekwara teknụzụ niile na-akpata ha. Ọ bụghị sayensị sayensị, ma ọ bụ oge dị ịtụnanya ná ndụ m. Achọpụtala m ihe na-agụ m agụụ, ma nwee obi ike na ikike m.
N’oge na-adịbeghị anya, akarịala m ụfọdụ ndị na-ede blọgụ zụrụ m. Nke ahụ kwesịrị ịbụ otito toro ndị a (Atụrụ m anya na ha were ya otu ahụ!). Site na 55,000,000 blọọgụ na-enyocha site na Technorati, ana m eme ngwa ngwa ngwa ngwa wee ruo ogo 35,000 ma ọ bụ karịa. Nke ahụ bụ kediegwu uto na kwesịrị weghara ụfọdụ ntị na ndị ụlọ ọrụ. M ka no na Top 100, ma o nweghi ihe m nwetara site na Blogging awards… mana ike m gwuru na mmuta banyere isi okwu m akwụgo. Nke a n'agbanyeghị ọtụtụ eti m ihe:
Abụghị m ọgaranya
Adighi m ama
Enweghị m 'n'ime' ozi na ụlọ ọrụ ahụ
Enweghị m njikọ ụlọ ọrụ
Anaghị m ebi na Silicon Valley (M bi na Indiana!)
Edebeghị m akwụkwọ (ma!)
M na-arụ ọrụ oge niile na ọrụ akụkụ
Fọdụ n'ime uru m nwere:
Enwere m nnabata nke m ma tinye saịtị m ma jigide ya bụ otu achicha.
Enwere m ike mmemme. WordPress bụ ebumnuche ịde blọgụ na-enweghị atụ, mana ekwesịrị m 'tweak' isiokwu m na nke ndị ahịa m iji bulie ha mma maka njiri na njikarịcha nchọta.
N'iburu nke ahụ n'uche, echere m na ọnụ ọgụgụ ndị na-esonụ dị mma ma na-ekwu okwu banyere ọrụ siri ike m na-arụ. Nke a bụ ndepụta nke blọọgụ 100 kacha elu ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ maara nke ọma na ọnwa atọ ha (Weebụsaịtị.com). N'eziokwu, enwere m ụzọ dị ukwuu m ga-aga tupu m gwọọ elu na ọkwa blogosphere - mana nke a ka na-enye ihe akaebe na ọdịnaya na ndụmọdụ nke blọọgụ m bara uru ma lekwasị anya.
Aha ya bụ Michelle Malkin
Mkparịta ụka gba ọtọ
Olee otú m sirila nwee ọganihu a? Ga-agụtụ ntakịrị ebe a, mana agbachighị m ihe nzuzo ọ bụla. Ọ bụ ihe niile ebe a na blog a… nnwale, nsonaazụ, ihe niile! Ikekwe akụkọ kachasị na-atọ ụtọ n'oge a bụ ịkesa ihe ọmụma a na ụfọdụ ndị na-ede blọgụ ọhụrụ. M na-eleta mmadụ ole na ole ugbu a ma na-enyere ha aka. Ana m ele anya ụbọchị nke stats ha gafere nke m (na-atụ anya mgbe m nọ na Top 100!).
Daalụ maka ịgụ! Daalụ maka ịza ajụjụ! Daalụ maka ịlaghachi azụ! Ọ bụrụ na enwere ụfọdụ isiokwu ịchọrọ ka m kọọ, biko nweere onwe gị. Agaghị m achọta ozi gbasara blog - mana ọ ga-amasị m ohere ịbanye n'ime isiokwu ị họọrọ.
Amaara m na abughi m blog na-eto ngwa ngwa na mbara ụwa… mana ọrụ ike m is na-akwụ ụgwọ. Na-alaghachi, aga m aga n'ihu ịkọrọ gị!
Tags: ịde blọgụtolite blog gịibuMalcolm obi omarobert na -ekwu okwuseth godinChebe IsraelteknụzụWordPress
Aha ya bụ Scott Sehlhorst
Dec 7, 2006 na 9:40 PM
Hey Doug, na-enwe ekele maka uto gị. Echere m na anyị na gị na-agba ịnyịnya-agbụrụ. Amalitekwa ihe karịrị otu afọ gara aga…
Dec 7, 2006 na 10:53 PM
Daalụ, Scott! Obi na-ekelekwa gị ndị be anyị! Otu ihe na-amasị m banyere agbụrụ a bụ na onye ọ bụla nwere ike imeri na enwere ọtụtụ ohere maka 'ndị mmeri'!
Dee 8, 2006 na 12: 47 AM
Nnukwu ọrụ Doug. Edeela m aha gị na blọọgụ gị maka ọnwa ole na ole gara aga, ma ruo ugbu a enwere m mmasị na ihe m hụrụ. Dịka onye na - ede blọgụ na - ebido (na otu ihe ahụ na - eti m), amaara m etu o siri sie ike ịdọrọ ndị na - agụ akwụkwọ ọhụụ mgbe ị ka na - ebido. Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu!
Dee 8, 2006 na 6: 36 AM
Daalụ maka ịbụ ezigbo ọrụ ọrụ na enyi m. Enwere m olile anya na m nwere ike ịme (maka) gị ihe ị meere "ndị ndụmọdụ" gị - Gafere gị !! Haha !! Adịghị m gburugburu gburugburu ogologo iji a 3 ọnwa nkezi, ma ọ dị ka m na-trending omume ọma… ekele gị.
Fficzọ okporo ụzọ maka patcoyle.net:
Taa 1 wk. Avg. 3 mos. Avg. 3 mos. Gbanwee
NA (N) 386,650 850,770 -
Ebe ọ bụ na abụghị m okwu izizi, anaghị m eziga ebe a ka ọ laghachi azụ na blọọgụ m.
Dec 8, 2006 na 4:39 PM
Okwu ndị ahụ bụ okwu ọma. Enwere m ekele maka ya. Anaghị m achọ ịkọwa uto nke blọọgụ m - mana oge ụfọdụ mgbe ịnweghị aha ma ọ bụ ama, ị ga-eme ka ndị folk mara na ị ka kwesịrị ilebara anya ha.
Oge ikpeazụ m dere banyere uto na ihe ịga nke ọma nke blog m, ọ mere ka ọbịaru dị ukwuu. (http://www.dknewmedia.com/2006/09/03/my-blog-is-better-than-9986-of-all-other-blogs/)
M na-eche ihe na-ekwu banyere anyị dị ka ndị na-agụ? Ana m edebanye aha na Johnathon Chow's blog ugbu a mgbe m gụsịrị otu o siri kwuo na blọọgụ ya gara nke ọma. O doro m anya na amụtawo m ọtụtụ ihe n'aka ya! Ya stats bụ nke anya, kwa.
Daalụ ọzọ! Ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla - egbula oge ịjụ!